idzi oldie asi goodie kindle paperwhite e-maverengi hazvina musoro zvakachipa nhasi chete
Kuru Nhau & Ongororo Aya oldie asi goodie Kindle Paperwhite e-maverengi ari asinganzwisisike zvakachipa nhasi chete
Aya oldie asi goodie Kindle Paperwhite e-maverengi ari asinganzwisisike zvakachipa nhasi chete
E-book vaverengi vanowanzoonekwa seakanaka emidziyo, vasingakwanise kuita mazhinji emabasa kunyangwe nyika & apos; akaderera uye anodhura mapiritsi eApple anogona kuita nyore. Iva zvazvingaite, Amazon yakanakisa kugona kurova goridhe ine yakakura Kindle chigadzirwa lineup inosanganisira yakaderera, yepakati, uye yepamusoro-magumo mamodheru kweanopfuura makore gumi ikozvino.
Ipo iyo e-commerce hofori inokombamira kusimudzira imwe yeiyo Kindle, Kindle Paperwhite, kana Kindle Oasis mhuri dzinenge gore rega rega, izvo hazvireve & maapos; hazvireve kuti vavhimi vezvibvumirano vanofanirwa kuregeredza zvachose shanduro dzekare dzemidziyo mitatu kana vachiisa pamwechete zvinyorwa zvekutenga zvemhando yepamusoro. nguva senge Zuva raamai & apos; , Semuyenzaniso.
Izvo & apos; s nekuti yazvino yekupinda-chikamu Amazon Kindle kazhinji inotanga pa $ 90, kazhinji ichidzika kuenda kumadhora makumi matanhatu nemashanu zvichikwira , nepo yepakati-renji Kindle Paperwhite yakaburitswa kumashure muna2012 inogona kutengwa parizvino zvishoma seUS $ 20.99.
Yekutanga Generation E-Reader, Yakavakirwa-mukati Chiedza, 2GB Kuchengeta
$ 2099 Yapera
2nd Generation E-Reader, 2013, Yakavakirwa-mukati Chiedza, 2GB Kuchengeta
$ 2999 Yapera
Ichokwadi, yekutanga-gen Paperwhite haina & apos; haina kuuya neiyo reza-yakatetepa, isina-kurema uye isina dhizaini 2018 & apos; yechina-gen Kindle yepakati-ranger , asi kweanopfuura mashoma makumi maviri madhora, iwe & apos; tarisai tarisa pane inoshamisa runyorwa rwezvinhu pano, kusanganisira zvese kubva muchivakwa-mukati mwenje chinokutendera iwe kuti uverenge ako aunofarira e-mabhuku murima kune zvachose kufunga-kuridza bhatiri. hupenyu hwemavhiki anosvika masere (!!!).
Sezvaunogona kufungidzira, idzi tsvina-dzakachipa zvikamu zviri kutengeswa nhasi chete paWoot zvinotsigirwa nemazuva makumi mapfumbamwe-warandi, kutumira (kwemahara kwenhengo dzePrimein) mumabhokisi ebrown ane 'akashandiswa' mamaki kunyangwe e-tailer zvine hunyanzvi kunyora chigadzirwa. mamiriro se & apos; agadziriswazve. '
Kana iwe uchimhanyisa, iwe unogona kusarudza pakati pe 'yakashandiswa - yakanaka' uye 'yakashandiswa - yakanaka kwazvo' yakanyorwa mamiriro, pamwe nepakati peWi-Fi-chete uye Wi-Fi + AT & T maseru-anogoneswa akasiyana, pamitengo kubva pane ataurwa pamusoro $ 20.99 kusvika ku $ 26.99.
Neimwe nzira, iwe unogona kusarudza iyo iri nani zvishoma yechipiri-gen Amazon Kindle Paperwhite pa $ 29.99 mu 'yakashandiswa - inogamuchirwa', 'yakashandiswa - yakanaka', kana 'yakashandiswa - yakanaka kwazvo' yakanyorwa mamiriro. Izvi zvinoita senge chisarudzo chiri nyore kuseka, asi uchitevera tsoka dzekuchengetedza kwe4GB, iyo 'yakanaka' uye & apos; yakanaka kwazvo '2GB mamodheru anogona kubuda mushe pamberi pemhondi new deal & apos; s chaiyo kuperazuvanguva.
Tichiri kure nezvatinodaidza kukwidziridzwa kukuru, ichi chizvarwa mitambo yegore ra2013 kuratidzwa kwakajeka e-pepa kuratidza, kuvhenekera kwe LED, simba rekugadzirisa, uye kubata mhinduro yekuisa kana ichienzaniswa neyekutanga wa2012. Pakupedzisira, sarudzo ndeyako, asi chero nzira, iwe & apos; muchange muchiita mukana wakanaka kwazvo.
pokemon enda Android kupfeka 2018
Nyowani Apple iPad 9.7 '(2018, 6th gen) mutengo uye zuva rekuburitsa
Verizon, AT & T, uye US Cellular inowana 4G LTE network inowedzera panguva yechirwere checoronavirus
Yakanakisisa Kutenga zvakare ine yekutengeserana-mukutengeserana kwechisina kuvhurwa Chiziviso 9: simuka kusvika kumadhora mazana mana nemazana mashanu kubva!
Vamiriri vemitemo vekuUS vanofunga bhiri raizovharira Apple kutanga-kuisa maapps ayo pa iPhone
Unoziva zvinomiririrwa neiyo 'S' muSamsung & apos; s Galaxy S mutsara? Mhinduro yacho yakanaka kwazvo
LG TONE + Ongororo
Best Buy ine Samsung & apos; s Galaxy S20 FE 5G iri kutengeswa ne100 muzana dhisikaundi, hapana kutengeserana-kuri kunodiwa
Pokemon Imba haichashande pane aya maApple uye iPhone mamodheru
Nzira gumi Samsung Imwe UI iri nani pane stock Android